အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးနှင့် C ပိုးအကြောင်း (ပေါင်းချုပ်) ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးနှင့် C ပိုးအကြောင်း (ပေါင်းချုပ်)
အသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးနှင့် C ပိုးအကြောင်းများကို သိလိုသူများအတွက် အပြည့်အစုံ ပေါင်းချုပ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆရာ့ အမေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ်လေးကို ပြောချင်ပါတယ်။ အမေက အသက် ၇ဝ နှစ်ထဲမှာပဲ ဒီနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့ ကပဲ နာတာရှည် အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါရယ်၊ အသည်းကင်ဆာ ရောဂါရယ်ကြောင့် ဆုံးသွားခဲ့ ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဖြစ်များတဲ့ အသည်းရောင် အသားဝါ ရောဂါကို မပေါ့ဆပါနဲ့လို့ ပြောချင် ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး ဖြစ်တဲ့လူတွေ တော်တော် များပါတယ်။ သွေးသွင်းတာက ဖြစ်ဖြစ်၊ ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူတာက ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆေးထိုး တာက ဖြစ်ဖြစ်၊ မသန့်ရှင်းတဲ့ ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်းတွေ၊ ဆေးထိုးအပ်တွေ ကနေ တစ်ဆင့် ကူးတာ များပါတယ်။
အမျိုးသားမှာ ပိုးရှိနေရင် အမျိုးသမီးကိုလည်း ကူးနိုင်ပါတယ်။ ဆရာ့ အဖေမှာတော့ ဘီပိုး၊ စီပိုးတွေ မရှိပါဘူး။ အမေကတော့ ဆရာ မှတ်မိသလောက် ဆိုရင် ဆရာတို့ ဆေးကျောင်းသား ဘဝမှာတုန်း ကတည်းက သွားဒုက္ခ ပေးတာကြောင့် သွားဆေးခန်းတွေမှာ သွားပြခဲ့ ရတယ်။ ဆရာတို့ မိသားစုကတော့ အဲဒါကြောင့် လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဆရာဝန် မိသားစု ဆိုပေမယ့် အမေ့မှာ စီပိုး ရှိနေတာကို လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က မှ သိပါတယ်။ အမေက ကျန်းမာရေး ကောင်းနေပြီး အမေ ကိုယ်တိုင်က ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း ကြောက်တော့ မစစ်ဖြစ်ဘူး။ ဆရာဝန် မိသားစု ဆိုပေမယ့် အဲဒီ တစ်ချက်တော့ လွတ်သွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက် အမေ အစားအသောက် ပျက်တယ်၊ ကြည့်ရတာလည်း ပုံစံ နည်းနည်း ပြောင်းတာကြောင့် ဆေးရုံကို ခေါ်ပြီး စစ်ဆေး ပါတယ်။ အဲဒီမှာ တွေ့တာက စီပိုး ရှိနေပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အသည်း အားဆေး ပေးပြီး စီပိုးကို ကုသဖို့ လုပ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ alpha-feto protein စစ်လိုက်တော့ အရမ်း များနေ ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ CT Scan ရိုက်ကြည့် လိုက်တော့ အသည်းက ကင်ဆာ စဖြစ် နေပါပြီ။ အသည်းကို ဆေးဖြန်းတာ (TACE-Trans-arterial Chemoemboliz ation) လေးကြိမ်လောက် လုပ်ရ ပါတယ်။ ရောဂါသိပြီး မဆုံးခင် အထိ သုံးနှစ်လောက် အတွင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေးတော့ နေသွားရ ပါတယ်။ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုက ပြည်သူလူထုမှ မဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုကို စောင့်ရှောက် နေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ၊ ဆရာဝန်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ မှာလည်း စောင့်ရှောက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်က သူများကိုပဲ ဂရုစိုက် နေပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရုတ်တရုတ် လေဖြတ်တာတို့၊ နှလုံးသွေးကြော ကျဉ်းတာတို့၊ ရင်ဘတ် အောင့်တာတို့၊ ဆီးချို ဖြစ်တာတို့ ဆရာဝန်ထဲမှာ ကို အဖြစ်များ ကြတယ်။ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်လည်း ပြင်းထန်တာကို တွေ့ရတယ်။
အကြံပေးချင်တာ ကတော့ ဆရာဝန်တွေ ကိုယ်တိုင်လည်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပေးကြပါ။ ဘီပိုး၊ စီပိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အခုခေတ်မှာ လူငယ် လူရွယ်တွေလည်း အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးမယ် ဆိုရင် မယူခင်မှာ သွေး စစ်ဆေးတာကို အရင် လုပ်သင့် ပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက် သာမကဘဲ မွေးလာမယ့် ကလေး အတွက်ပါ ထိခိုက်မှုတွေ ရှိနိုင်တာ ကြောင့်ပါ။ မလိုအပ်ဘဲ ဆေးထိုးတာကို ရှောင်ကြဉ် စေချင် ပါတယ်။ စိတ်ချ ယုံကြည်ရတဲ့ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းမှာသာ ဆေးထိုး စေချင် ပါတယ်။ ချွန်ထက်တဲ့ ကိရိယာတွေနဲ့ အရေပြားကို ထိုးဖောက်တာ ဆိုရင် သတိထား စေချင် ပါတယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါဘီပိုး၊ စီပိုးတွေက ဖြစ်တာ ကြာလာတာနဲ့ အသည်းခြောက်တာ၊ အသည်းကင်ဆာ ဖြစ်တာတွေ ကြုံတွေ့နိုင် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာ့ အနေနဲ့ ပြောချင်တာ ကတော့ ဒီခေတ်ကြီးက အရမ်း တိုးတက် တာကြောင့် ဘာပဲလုပ်လုပ် သတိနဲ့ ဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ပြီး လုပ်စေချင်တယ်။
(ပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်လင်း( ခွဲစိတ်နှင့် ကင်ဆာ ပါရဂူ)
အသက် (35) နှစ်။ C ပေါ့စတစ်ပါ။ ပိုးကောင်ရေ6သိန်းကျော်။ Fame က ဆေးနဲ့ ရီဘာဘရင်း တွဲသောက်နေပါတယ်။ 3.6 သန်းကနေ ခြောက်လသောက်တော့ ကျသွားတာပါ။ အမ်ထရာဆောင်း ရိုက်တော့ ကျောက်ကပ်အမှုန် နည်းနည်း တွေ့တယ်တဲ့။ Fatty liver လို့လဲပါတယ်။ Alt Ast တွေကောင်းပါတယ်။ လစ်ပစ်လဲစစ်တာပုံမှန်ပါပဲ။ လစဉ်လဲ အမ်ထရာဆောင်း ရိုက်ပါတယ်။ ဒီလမှာ ခုလိုလာထွက်နေပါတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမယ် (or) ဘယ်လို take care လုပ်ရမယ်ဆိုတာ fb ကနေ ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။
အသဲရောင် (စီ) တွေ့ရင် ရောဂါလက္ခဏာမရှိဘဲနေတတ်လို့၊ အတော်များများက ဆေးစစ်တဲ့အခါ အမှတ်မထင် ပိုးရှိနေတာကို တွေ့ကြရတယ်။ (စီ) ပိုးတွေ့တယ်လို့ဆိုရင် သူဟာကမ္ဘာပေါ်ကလူပေါင်းသန်း ၁၇ဝ ထဲက တယောက်ပါ။ ပိုးရှိနေသူ ၁ဝဝ မှာ ၇၅-ဂ၅ ယောက်လောက်ကနာတာရှည် ဖြစ်ကြတယ်။ အနှစ် ၂ဝ ကျော်ရင် ၂ဝ-၃ဝ% က အသဲခြောက်တယ်။ အသဲခြောက်သူ ၁-၄% က အသဲကင်ဆာဖြစ်တယ်။ နှစ်စဉ် ၂-၅% က အသဲအလုပ်မလုပ်နိုင်တာ ဖြစ်တယ်။ http://www.patient.co.uk/doctor/hepatitis-c-pro
Hepatitis C virus (HCV) ဗိုင်းရပ်စ် (စီ) ပိုးဝင်ရင် သာမန်ကာရှန်ကာ ၁-၂ ပါတ်လောက်သာ ခံစားရတာမျိုးနဲ့ အသက်ကိုပါ ရန်ရှာတဲ့ အဆင့်မျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဘီ) နဲ့မတူတာက ဘီပိုးဟာအထဲဝင်ပြီး၊ ကင်းစင်သွားနိုင်ပေမဲ့ (စီ) ပိုးကတော့ အမြဲရှိနေတတ်တယ်။ (ဘီ) ပိုးကလိင်ကနေတဆင့် ကူးစက်တာများပြီး၊ (စီ) ပိုးကတော့ သွေးကတဆင့် ကူးတာကအဓိက ဖြစ်တယ်။
ပိုးတွေ့ရင် ဆေးကုဘို့လို-မလို ဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ ရောဂါက အန္တရာယ်နည်းနေရင် ဆေးပေးချင်မှ ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကထိုးဆေးရော စားဆေးပါပေးမှာပါ။ တနည်းက ၄၈ ပါတ်ကြာမှာဖြစ်ပြီး၊ တနည်းက ၂၄ ပါတ်။ လိုရင် နောက် တကြော့။ ဆေးက ၂ မျိုးသုံးနေပါတယ်။ Interferon ထိုးဆေးနဲ့ Ribavirin စားဆေးတွေပါ။ Injection Interferon ကို ၇ ရက် တပါတ်မှာ ၃ ကြိမ်ထိုးတယ်။ နောက်ပေါ်ဆေး Pegylated ကတော့ ၁ ပါတ်မှာ ၁ ကြိမ်နဲ့ရတယ်။ Ribavirin စားဆေးကို ၁ ပြားတနေ့ ၂ ကြိမ်။ ၆ လ ကနေ ၁၂ လကြာပါမယ်။
HIV ပါရှိနေသူဆိုရင် စောစောပိုင်းကတည်းက ကုရင်ကောင်းတယ်။ အသဲရောဂါ နည်းနည်းလေးသာရှိနေသူတွေ ဆေးမလိုသေးပါ။ အသဲရောဂါ အသင့်အတင့် ဆိုးလာသူတွေက အသဲခြောက်တာ ဆက်ဖြစ်စရာများလို့ ဆေးကုသရမယ်။ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးနဲ့ ရမဲ့အကျိုး ချိန်ဆရမယ်။ စောင့်ကြည့်နေရမယ်။ အသဲခြောက်နေပြီဆိုရင် အသဲအစားထိုးတာတခုဘဲ လုပ်နိုင်တယ်။
HIV-positive ဆိုရင် ဘယ် Genotypes ဖြစ်ဖြစ် တနှစ်ကြာပေးတယ်။ Genotypes2နဲ့3ကို အချိန်တိုပြီး၊ 1 နဲ့4တွေကို တနှစ်မက ပေးတာလဲရှိတယ်။ ဆေးကုသရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ပိုးတွေကိုရှင်းချင်လို့ဖြစ်တယ်။ ဆေးပေးပြီးနောက် ၆ လမှာ သွေးထဲမယ်ပိုးမရှိတော့ရင် Sustained virological response (SVR) ခေါ်တယ်။ ကောင်းတယ်။ ပိုးကင်းသွားပြီ။ Liver cirrhosis အသဲခြောက်တာ၊ အသဲကင်ဆာနဲ့ အသဲအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာတွေ ဖြစ်ဘို့အခွင့်အလမ်း အတော်ကြီး နည်းတယ်။ ပိုးနည်းနည်းလေးသာကျန်တော့တာလဲ ကောင်းတယ်။ တချို့မှာ ဆေးကုလို့ ထင်သလောက် မကောင်းတာလဲရှိတယ်။
1. Hepatitis C (1) (စီ) ပိုး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/11/hepatitis-c.h…
2. Hepatitis C (2) (စီ) ပိုး နောက်ဆက်တွဲ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/03/hepatitis-c.h…
3. Hepatitis C (3) (စီ) ပိုး (ဗိုင်ရယ်လ်-လုဒ်) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/…/hepatitis-c-2.html
4. Hepatitis C Vaccine အသဲရောင် (စီ) ကာကွယ်ဆေး အလားအလာရှိ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/…/hep-c-vaccine.ht…
အသည်းရောင် စီ ရောဂါ
အသည်း ရောင်စီ ရောဂါ ဟာ အသည်းရောင် စီပိုး ရှိသူနဲ့ လိင်တူ လိင်ကွဲ ဆက်ဆံ မိခြင်း၊ အသည်းရောင် စီပိုး ပါသော သွေး၊ ဆေးထိုးအပ်၊ စီပိုးပါ သော နားဖောက် ပစ္စည်း၊ အပ်စိုက် ခြင်းနဲ့ ဆေးမင် ကြောင် ထိုးခြင်း၊ ပိုး ရှိသော ဓားတစ်ချောင်း တည်းဖြင့် ဆက်တိုက် ခေါင်းရိတ် ခြင်း၊မုတ်ဆိတ် ရိတ်ခြင်း၊ သွားတိုက်တံ၊ သွားကြား ထိုးတံ တို့ကို အတူ သုံးခြင်း၊ လက်သည်း ညှပ်ခြင်း၊ မသန့်ရှင်း သော ကိရိယာ ဖြင့် သွားနုတ်၊ သွားဖာခြင်း စတဲ့ အပြုအမှု တွေ ကြောင့် ရောဂါ ကူးစက်ခြင်း ဖြစ်တာပါ။
သွေးစစ် လို့ စီပိုး ပဋိလုံ ပစ္စည်း ဖြစ်ရင် စီပိုး ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ စီပိုး ကူးစက် ခံရသူဟာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း အောက် ရှိပါတယ်။
စီပိုး လူနာများ ဟာ အရက်၊ ဆေးလိပ်နဲ့ ကွမ်းစားခြင်း ကို ရှောင်ကြဉ် ရပါမယ်။ ဟင်းမှာ အဆီ အနှစ်၊ မလိုင်၊ ထောပတ်၊ နို့၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥအနှစ်နဲ့ ဆီကြော် မုန့်၊ ဟမ်ဘာဂါ၊ အသင့် အမြန်စား အစာတွေ ကို ရှောင် ရပါမယ်။ ဆိုးဆေး ပါတဲ့ အရည်နဲ့ မုန့်များ မစားရ။ သံဓာတ် ပါတဲ့ အားဆေး၊ အချဉ် ရည် ( သံပရာသီး၊ ရှောက်သီး ) တွေကို ရှောင်ကြဉ် ရပါမယ်။ အငန်ဓာတ် ပါတဲ့ ငါးပိ၊ ငါးခြောက်၊ ငံပြာရည် တို့ကို လျှော့စား ရပါမယ်။
လိုအပ် တဲ့ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု စီပိုး ရှိပြီ ဆိုရင် တိကျ မှန်ကန်တဲ့ စက်ကြီးများ နဲ့ ထပ်မံ စစ်သင့် ပါတယ်။ စီပိုး သေချာ ရင် အသည်းကောင်း၊ မကောင်း သိဖို့ အဝါဓာတ် အသည်း အင်ဇိုင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးတွင်း အသား ဓာတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ ဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်း၊ အသည်း ကွန်ပျူတာ ဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ် မှန်ပြောင်း ဖြင့် အသည်း ရောဂါ ကြောင့် အစာရေမြို သွေးကြော ထုံး၊မထုံး စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးဖြူဥ၊ သွေးနီဥနဲ့ သွေးမွှား အရေ အတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ သွေးတွင်း အသား ဓာတ် စစ်ဆေးခြင်း၊ တီဗွီ ဓာတ်မှန် ရိုက်ခြင်းနဲ့ အသည်း အင်ဇိုင်း စစ်ဆေး ခြင်း များ လုပ်ဆောင် နိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ အချိန်အထိ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်သေးပါ။ သို့သော် ရောဂါ ကုသဆေး ရှိပါ တယ်။ အင်တာ ဖရွန် ထိုးဆေးနဲ့ ရီဘာရင် စားဆေး နှစ်မျိုး တစ်ပြိုင် တည်း သုံးပြီး ကုရ မယ်။ တစ်မျိုး တည်း သုံးပြီး မကု သင့်ပါဘူး။ ထိုးဆေး ရဲ့ ဆိုးကျိုး တွေက ကုန်ကျ စရိတ် များခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ တုပ်ကွေး ကဲ့သို့ ကိုက်ခဲခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ သွေး အားနည်းခြင်း၊ သွေးဖြူ ဥ နည်းခြင်း၊ မျက်စိ ကြည့် မကောင်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ် ကျခြင်း၊ ရိုးတွင်းခြင် ဆီ အားနည်းခြင်း နဲ့ တခြား ဆိုးကျိုးများ ရနိုင် တဲ့ အပြင် သွေးနီဥ များ ပေါက်ကွဲ ၍ အားနည်းခြင်း ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါတယ်။
ဆေး ကုသခြင်း အကျိုးတွေက အသည်းရောင် စီပိုး ပျောက်ခြင်း၊ အသည်း ထိခိုက်မှု ဒဏ်ရာများ၊ အသည်း တွင် အမာရွတ် ထင်ခြင်း၊ အသည်း ကျွတ်ဆက် ခြင်း၊ အသည်း ကင်ဆာ ဖြစ်ခြင်းမှ သက်သာ စေတယ်။ အသည်း ကင်ဆာ အထိ မဖြစ် ရအောင် ကာကွယ် ရေး သည် ကုသ ရေး ထက် ပိုကောင်း သည် ဆိုတဲ့ အတိုင်း စီပိုး ဝင်ရောက်မှု မခံ ရအောင် ဂရုပြု သတိထား သင့်တဲ့ ရောဂါ တစ်ခု ဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေးနွေး လိုက် ရပါ တယ်။ ။
အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ ရနေပြီဟုဆို
ရန်ကုန်၊ မတ် ၂၂ -
အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုး ပျောက်ကင်းအောင် နိုင်ငံခြားသွားပြီး ကုသစရာမလိုဘဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တင် ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပြီလို့ သိရပါ တယ်။
“စီပိုးသေဆေးတွေနဲ့ ကုလို့ စီပိုး ပျောက်သွားတဲ့ သူတွေ အများကြီး ပါ၊ စီပိုး ကို သတ်တဲ့ ဆေးတွေကို အပြည်ပြည်ဆိုင် ရာ ခေတ်မီနည်းစနစ်တွေအတိုင်း ကုလို့ရနေပါပြီ”လို့ UMFCCI မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အ သည်း ကျန်းမာရေး ပညာပေး ဟောပြောပွဲ မှာ အသည်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခ ဦးခင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ စီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို သေစေတဲ့ anti-viral ဆေးတွေ ကို သုံးပြီး စီရောဂါပိုးကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုနိုင်ပြီဖြစ်သလို စီပိုးသတ်တဲ့ စားဆေး၊ ထိုးဆေးတွေကိုလည်း မြန်မာပြည်မှာ တင် ဝယ်ယူနိုင်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
“အဓိကကတော့ အသည်းရောင် အသားဝါစီရောဂါပိုး လုံးဝပျောက်သွားပြီး လူ မသေဖို့ပါပဲ၊ အဲဒီလို စီပိုးပျောက်သွားမှသာ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ အသည်းရောဂါ ပိုမဆိုးလာစေဖို့ အသည်းထဲမှာ အမာရွတ်ထင်တာ၊ အသည်းဆဲလ်တွေ ပျက်စီးပြီး ဒဏ်ရာရနေတာတွေ လျော့သွားဖို့ ၊ ပျောက်သွားဖို့ ၊ အသည်း ကင်ဆာဖြစ်တာကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ နဲ့ နေရ ထိုင် ရတာ ပိုပြီးတော့ ကောင်းလာပြီး စိတ် ကြည်လင်လန်းဆန်းလာဖို့ပဲ”လို့ အသည်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးခင် မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
အသည်းရောင်အသားဝါ စီ ရောဂါပိုး ရှိရင် သေချာ စနစ်တကျကုဖို့ လိုပါတယ်။ ကုသမှုခံယူသူတွေရဲ့ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း လောက်မှာ ပိုးလုံးဝ ပျောက်သွားနိုင်တဲ့ အပြင် အသည်းခြောက်တာ မဖြစ်အောင်နဲ့ အသည်းကင်ဆာ မဖြစ်အောင် လည်း တားဆီးနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယခုအခါ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုး ကူးစက်ခံ ရသူဦးရေ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွား လာနေ သည့်အတွက် ရောဂါအကြောင်းနှင့် ကူးစက်ပုံကို သိရှိရန် များစွာလိုအပ်ပေသည်။
အေဘီစီဟု အလွယ်တကူ ခေါ်ဝေါ်နေကြသော အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီနှင့်စီရာဂါပိုးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ကူးစက်ပုံတူကြသည်။ ကူးစက် လွယ်ပုံခြင်းသာ ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အသည်းရောင် အသားဝါ ဘီရောဂါပိုးသည် အေအိုင်ဒီအက်စ် ဖြစ်စေသော HIV ရောဂါပိုးထက် အဆ(၁၀၀)ပိုမို ကူးစက်လွယ်ပါသည်။
ရောဂါပိုးရှိသောသူရဲ့ သွေးနဲ့ထိလျှင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ရောဂါပိုးရှိသူ သုံးထားတဲ့ အပ်နဲ့ဆိုလျှင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအကြောဆေးထိုးပြီးအပ်တွေရောသုံးရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။ ပိုးရှိတဲ့သွေး သွင်းမိရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ကျောက်ကပ်ဆေးတဲ့စက်မှာ ပိုးပါသွားရင် သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
နှုတ်ခမ်းချင်ိးထိမိရင် (သို့်)တံတွေးကနေတစ်ဆင့် ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါသည်။
မိခင်မှ ကလေးသို့ သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
ပိုးပါတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ ခြစ်မိရင်၊ဖောက်မိရင်(ဥပမာ- နားဖောက်တာ၊ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးတာ၊သွားနှုတ်တာ၊ရှားခြစ်ခြင်း၊ရှားဆွဲခြင်း) သေချာပေါက်ကူးနိုင်ပါသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးရှိသူသည် အသည်းခြောက်ရောဂါနှင့် အသည်းကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းများသဖြင့် ရောဂါမဖြစ်မီ ကာကွယ်ရန်နှင့် အကယ်၍ ရောဂါကူးစက်ခံရပါက မည်ကဲ့သို့ပြု မူနေထိုင်ရမည်ကို တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာဝန်များနှင့် တိုင်ပင်၍ ကုသမှုခံယူရပေမည်။
အသည်းရောင် အသားဝါဘီရောဂါကို ကာကွယ်ဆေးထိုး၍ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အသည်းရောင် အသားဝါ စီရောဂါအတွက် ကာကွယ်ဆေးမပေါ်သေးပေ။ သို့သော်အသည်းရောင် အသားဝါစီရောဂါကို၈၀% ပျောက်ကင်းအောင် ဆေးကုသနိုင်ပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဆေးကုသမှုစရိတ် ကြီးမြင့်နေသေးပေသည်။
အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီနှင့်စီရောဂါပိုးရှိသူသည် အရက်၊ သံဓါတ်များစွာပါသော အစာနှင့်အား ဆေး၊ ဗီတာမင်စီများစွာပါသော ဆေးနှင့်အသီးအနှံများကို အထူးဂရုပြုရှောင်ကြဉ်ရမည်။ စီရောဂါပိုးရှိသူသည် အရက်သုံးစွဲပါက အသည်းခြောက်နှုန်း ပိုမြန်ဆန်သည့်အတွက် အရက်၊ ဘီယာ၊ ၀ိုင်၊ထန်းရည် စသည်တို့ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမည်။ သံဓါတ်များလျှင် အသည်းတွင် အနာရွတ်ပိုထင်လွယ်သဖြင့် သံဓါတ်များစွာပါသော အစားအစာ
ဥပမာ - အသည်း၊ အမြစ်၊ ကလီစာ၊ သွေးခဲများ၊ သံဓါတ်များစွာပါသော အားဆေးများကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ဗီတာမင်စီသည် သံဓါတ်ကို အူလမ်းကြောင်းမှစုပ်ယူမှုများစေသဖြင့် ဗီတာမင်စီများစွာပါသော ဆေးနှင့်အသီးအနှံများ ဥပမာ-ရှောက်သီး၊ သံပရာ သီး၊ ဂရိတ်ဖရုသီး စသည့်အရည်ရွှမ်းသော အသီးများကို များစွာစားသုံးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
ထပ်မံ၍ ပြည့်စုံအောင် လေ့လာလိုသူများ အောက်ပါလင့်များတွင် သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ကြပါသည်။